Uyenza njani i-ID yomntu osingathi kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 309
Abasebenzisi abajoyina iinethiwekhi zokunxibelelana banamagama abo, iinombolo zomnxeba kunye ne-imeyile ababhalisa ngayo eqongeni. Ngokunjalo, banekhowudi yokuchonga eyaziwa ngokuba yikhowudi yesazisi.
I-Instagram inika umsebenzisi ngamnye ikhowudi yakhe yesazisi eyenziweyo ngexesha lobhaliso. Le khowudi yokuchonga yahlukile kwaye ayinakudluliselwa kwaye inikezelwe yinkqubo kwaye ayivelwanga ngumsebenzisi. Awunakuze uyitshintshe, nokuba utshintsha igama lomsebenzisi, i-imeyile imeyile okanye inombolo yefowuni oyisebenzisileyo ukubhalisa.
Yenziwe ngumtya wamanani.
Yintoni ikhowudi ye-ID ye-Instagram?
Ngaphandle kokungazi ngokubanzi ukuba abasebenzisi banayo le khowudi, izalisekisa ukubaluleka okukhulu. Ngale khowudi unokufumana kwakhona idatha yeakhawunti yakho ukuba akunakwenzeka ukwenza njalo ngegama lakho lomsebenzisi.
Eminye imithombo iyakuqinisekisa ukuba ngale khowudi uya kuba nakho ukwazi ukuba leliphi ixesha kwimbali yeerekhodi zomsebenzisi, okt uhlobo lwerekhodi yesazisi. Umzekelo woku, ukuba ikhowudi yakho yesazisi yinombolo eyi-100000, ungumsebenzisi we-100000 obhalise kwi-Instagram.
Kwelinye icala, unokufumana abasebenzisi ngqo kwiprofayili yabo, njengoku, yenza lula inkqubo yokulandela abasebenzisi.
Khangela i-ID yeakhawunti ye-Instagram.
Uya kufumana i-ID yomsebenzisi usebenzisa ezinye iindlela. Ungasebenzisa iphepha elinye lewebhu okanye ukhuphe ikhowudi kwi-URL yeprofayile okanye ufumane i-ID ngokuthe ngqo kwiprofayili yomsebenzisi.
Sebenzisa amaphepha ewebhu.
Amanye amaphepha ewebhu aya kukunceda ufumane iKhowudi yesazisi ngokulula. Ngokukhangela ngokukhawuleza kuGoogle ungafumana "commentpicker.com". Eli liphepha elisebenza njengomphathi wemidiya yoluntu, ekwazi ukukhuphela imifanekiso ye-instagram, ukubala amagama, ukwenza izimvo kuFacebook nokunye okuninzi.
Kodwa umsebenzi onomdla kuthi ukwicandelo "Faka igama lomsebenzisi le-Instagram". Apha ungabeka igama lomsebenzisi le akhawunti apho ufuna ukufumana igama lomsebenzisi. Emva koko ucofa "fumana i-ID yomsebenzisi we-Instagram kunye nokubala komlandeli". Ngokukhawuleza emva koko, iphepha liya kuqhubeka ukufumana i-ID yomsebenzisi.
Ngale nkqubo, kuya kufuneka uguqule igama lomsebenzisi kancinci ukuze ufumane i-ID:
Ukusuka kwisikhangeli esikhethiweyo, khangela iqonga le-Instagram ecaleni kwegama lomsebenzisi: "I-Instagram.com/ igama lomsebenzisi".
Yongeza le khowudi ilandelayo ekupheleni kwegama: "? _A = 1". Cofa ukungena, kunye nekhowudi yemvelaphi yomsebenzisi iya kuvela ngokuzenzekelayo.
Ukuba sele unayo ikhowudi, ungayisebenzisa ukufikelela kumsebenzisi.
Ngaphandle koko, ukuba unekhowudi yemvelaphi kwaye hayi igama lomsebenzisi, uya kuba nakho ukubuyela kuyo "Commentpicket.com":
Fumana icandelo "Faka i-Id yomsebenzisi we-Instagram" kwiphepha le-commentpicker.com kwaye ufake inombolo ye-ID. Emva koko cinezela "Fumana igama lomsebenzisi le-Instagram".
Nje ukuba inkqubo yenze iodolo, igama lomsebenzisi liya kubonakala emazantsi ebhokisi.
1 Yintoni ikhowudi ye-ID ye-Instagram?
2 Ngekhowudi yemvelaphi
3 Ukuba sele unayo ikhowudi, ungayisebenzisa ukufikelela kumsebenzisi.